Alex Iwobi Oo Si Carro Leh Ugu Jawaabay Wargeysyada The Sun Iyo Daily Mail Oo Maanta Ka Qoray War Ku Saabsan Mustaqbalkiisa Arsenal - Gool24.Net
Weeraryahanka reer Nigeria Alex Iwobi ayaa weerar ku qaaday wargeysyada Ingariiska ee The Sun iyo Daily Mail ka dib markii ay maanta qoreen in xiddigaan uu sheegay inuu isaga tago Arsenal haddii ay kooxda la soo wareegto Wilfried Zaha.
Labada wargeys ayaa maanta qoray in Alex Iwobi uu sheegay inuu ka dhaqaaqayo Emirates Stadium xagaagan haddii Arsenal ay soo iibsato xiddiga 80ka milyan ginni lagu qiimeeyay ee kooxda Crystal Palace Alex Iwobi.
The Sun iyo Daily Mail ayaana sheegay in sababta uu Iwobi ugu hanjabayo inuu baxayo inay tahay inuu ogyahay inuu waayayo booskiisa kooxda haddii weeraryahanka Ivory Coast Wilfried Zaha uu yimaado kooxda xagaagan.
SIDOO KALE AKHRISO: Liverpool Oo Shaacisay Liiska 23ka Xiddig Ee U Safray Turkiga Ee Wajahaya Chelsea Kulanka UEFA Super Cup Iyo Hal Xiddig Oo Ka Maqan
Iwobi ayaana ka jawaab celiyay wararka ay ka qoreen labadaan wargeys isagoo sawiro ka soo qaaday warkii ay ka qoreen, waxaana uu soo dhigay bogiisa rasmiga ah ee Twitter.
Waxa uu soo raaciyay qoraal u dhignaa sida tan: “Waa war been ah, waa guji raadin! Ma garanayo sababta wargeysyada qaar ay ugu riyaaqaan inay ereyada qaloociyaan. Waxaan rajeynayaa inay Arsenal la soo wareegto xiddigo waa weyn oo aan horumar sameyno koox ahaan. Waxaan isha ku hayaa xilli ciyaareedka cusub. Axad wanaagsan.”
Arsenal ayaa ka qabowday xiisaha Wilfried Zaha madaama Crystal Palace ay ku adkeysaneyso in lacag gaareysa 80 milyan ginni la soo saaro miiska si heshiiska uu u dhaqangalo waana lacag aysan awoodin kooxda Gunners.
Zaha ayaase la sheegay isbuucaan inuu ku wargeliyay Crystal Palace inuu doonayo inuu baxo, waxaana sidoo kale xiiseyneysa kooxda kale ee Ingariiska ee Everton.